I-BitCAD-Ukuthelekiswa kwe-AutoCAD (Umjikelo 1) -iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Ukuqhathaniswa kweB BitCAD - AutoCAD (i-Round 1)
Ndakhe ndathetha ngeB BitCAD, nto leyo enye yezoqoqosho AutoCAD, kunye nesibhengezo kakhulu kwaye ngoku ngoku uye wakhulula i-6.5 inguqu yezinto ze-3D.
Nsuku zonke iinkampani ezininzi ziphoqeleka ukuba ziyeke ukukhwabanisa ngenxa yokuba izivumelwano zamazwe ngamazwe zifumana oorhulumente abaninzi abachaphazelekayo ekukhuseleni i-copyright, kunye namaziko abucala abeka esweni ukuthotyelwa.
Ndiyazi ukuba ezi zicelo azinakuze zifikelele kubuchule obupheleleyo be-AutoCAD okanye iMicrostation, kodwa ndikwakholelwa ekubeni ezinye iindlela mazikhuthazwe kuba zisebenza ngokupheleleyo; Ndiqinisekile ngale nto kangangokuba ndigqibe kwelokuba ndilivule icandelo elitsha phantsi komgca we-IntelliCAD. Kolu hlaziyo, ndenza uthelekiso phakathi kwe-AutoCAD 2008 kunye neBitCAD, ngokubhekisele kulwakhiwo lwedatha, kugxininiso kubukho bomyalelo.
Ibha yokwakha idatha
Lo mfanekiso ungentla umele uthelekiso lwebha yokuzoba phakathi kwe-AutoCAD 2008 kunye neBitCAD 6.5. Imiyalelo iphantse yafana, umahluko othile; kwibar phakathi kwawo omabini la manqaku ndibeke ii-equivalents. Umgca weqela le-BitCAD kunye ne-xline kwi-icon enye, kunye nomda ngomyalelo we-pline
Yintoni enye ye-AutoCADUmyalelo webhloko, i-BitCAD inenketho yokuyifaka, ukuyila kuya kufuneka uye kwimenyu izixhobo, kunye nomyalelo wesithili osemenyu Mkulungiswa.
Kubonakala ukuba i-AutoCAD ininzi, kwaye i-BitCAD: Ifu kunye neThebula azibonakali zikhona.
Yintoni enye yeBitCAD: Imiyalelo yeDonut, ukusula kunye nemiyalezo yokubasebenzisa kwi-AutoCAD kufuneka imenyu Dweba
Ngokucacileyo, imiyalelo ye-freehand kunye neendiza ayikho kwi-AutoCAD, eli lilandelayo lifana neliqinileyo, kodwa i-BitCAD inesiseko sayo kwimenyu ye-3D.
Enye yezona zinto zibalaseleyo zeBitCAD kukuba imiyalelo kule bar sele izisile ezinye iindlela, ukuze ezinye iindlela ezinokubakho ziboniswe ngomyalelo. Iyafana nokusebenza kweMicrostation. Nge-AutoCAD ungazakha kwakhona iimenyu zokuhla kodwa iBitCAD sele izizisile ngokwakhona.
Ngale ndlela, ibha yamaqhosha ali-18 inamaqhosha angama-32 ongezelelweyo, yiyo loo nto iba yimiyalelo engama-50 ethe ngqo. Ayisiyo yokuba imiyalelo ayikho kwi-AutoCAD, kodwa apho ifuna inyathelo elifunekayo lokusebenzisa enye indlela, ngokwenza oko kusebenze umthetho kunye neqhosha lasekunene le mouse.
Kuphumelele kakhulu ngendlela, ngale ndlela indlela yokukhethwa komyalelo wesibini ifumaneka kwiqhosha lokuqala.
Ukongeza, xa umthetho wenziwe ukuba usebenze, ukhetho lwesithathu lomyalelo, olwaziwa njengemenyu yokuqulathiweyo, luyafumaneka ngonqakrazo olunye. Ngokunjalo, oku kusebenza kuthathwe kwi-Microstation, ngenjongo yokuba ifumaneke ngonqakrazo, nje ukuba umyalelo ugqityiwe yiphaneli inyamalale.
Kwimeko ye-AutoCAD, ifuna inyathelo elinye, ngeqhosha lasekunene lempuku ukubona ukhetho lomxholo. Zombini zibonisa apha ngezantsi ukhetho lomgca wokusebenzisa ikhibhodi.
Kubalulekile ukukhumbuza ukuba i-AutoCAD kulezi nguqulelo idibanise umgca wenkcazo ejikelezayo eduze kwesikhombisi; Nangona kunjalo, isisombululo seB BitCAD sibonakala sifanelekile ukuphepha ukusebenzisa ikhibhodi okanye iqhosha le mouse.
Le nxalenye iphinda yenza lula ukusebenza kunye nokudibanisa imiyalelo, ukunika umzekelo oyintloko:
Umyalelo womgca, kwi-AutoCAD usebenza kuphela ukwenza imigca, ulinde ukhenketho kwiindawo ezivela kwimvelaphi / imvelaphi okanye umyalelo kwibhodibhodi; ngelixa umxholo we-BitCAD umxholo usebenze ukhetho:
I-Angle, apho ugcina khona ukuba ubhale i-annoying @
Landela ukuba umyalelo omde udibeneyo, ukuvumela ukuba uqhubeke kwinqanaba elifanayo njengomgca wangaphambili
Lenght, apho ungangena khona umgama oceliwe ngumyalelo ode
Hlehlisa / kwakhona, oku kufuna ukusetyenziswa kwebhodibhodi okanye iqhosha lasekunene.
Kwaye ukusuka kwinqanaba lesithathu ukuya phambili, ukusebenza kweValiwe kusebenze, ukuze uvale kunye nenqaku lokuqala elibonisiweyo, ngaphandle kokuba yintsimbi.
Ukuphunyezwa kwemiyalelo yombhalo
Apha imiyalelo isebenza ngokufanayo kwiinkqubo zombini, kwaye kwaye kwafunyanwa imiyalelo efanayo kunye neendlela ezimfutshane.
Ngokuqinisekileyo, ukwakhiwa kwedatha kwiBitCAD kusebenza ngakumbi njengoko kufuna amanyathelo ambalwa. Kucacile ukuba abasebenzisi bafumana ukuziqhelanisa ne-AutoCAD yokudibanisa ikhibhodi, imouse kunye nesitshixo se-Esc, kodwa ukuba unamava kuzo zombini ezi nkqubo ukuzama, ukwenza umsebenzi ofanayo, kuya kuba ngumdla ukwazi ukuba mingaphi imiyalelo embalwa eyenziwa ngumntu osebenzisa iBitCAD. Ngexesha, inokuba yinto enye, kodwa ekusebenzeni kuyacaca ukuba iinzame zobuchopho bomntu ziyadinisa ngakumbi, ngakumbi ukuba bekukho abahlanu bekhathuni abasebenza iiyure eziyi-8, emva kweeveki ezi-4 zomsebenzi sinokukholelwa ukuba kukho ukusebenza okungcono kunabo babenengqondo ngaphantsi kokuhlutha.
Ekupheleni kwale kumjikelo wokuqala, BitCAD ogqiba ukulwa% 10 kuphela lwabiwo-mali, kwelinye post iya kuqhubeka ukubona ezinye ukufana, ngoba ndicinga ngoku uhambelwano olugqithayo ukuba inkampani okholwayo ukuba AutoCAD ayikho ngaphakathi ngumnqantsa bonke abasebenzi kunye oye wathatha indlela efanelekileyo ekungagcini.
Inguqulelo yeBitCAD 6.5 ibandakanya i-3D, ngexabiso elingaphantsi kwe-400 Euro, ukuba inkampani ithenge ikhompyuter ngeedola ezingama-700 okanye nangaphezulu, kubonakala kum ngathi iyakwazi ukuthenga enye yezi layisensi. Ngokuqinisekileyo abantu abaninzi abayisebenzisi BitCAD kuba engayazi, nangona i-30 imihla yeentsuku isebenza ngokufanelekileyo ukuyivavanya.
Este akunjalo iposi exhasiweyo
Indlela yokulinganisa indlela kwiGoogle Earth 5.0
Ngaba ikhona ibhlog kwizithuba ezingaphezulu kwama-500 amangeniso?
Eyona ndlela, le nkqubo i-intanethi, ingahlolwa, yinto enhle, kodwa ithe ithengwa phi namhlanje kwi-2014?, Ngokucacileyo inkampani yahlaselwa. zonke iikhonkco zorhwebo ziphukile.
I-Pline ikucela ukuba ubonise amaphuzu, anokuthi ucofe ngokuchanekileyo kwesikrini okanye ufake ukungqinelana kwifom x, kwaye
Ngoko ke umyalelo eboniswe ngezantsi iinketho njengoko Vala (uvale Somzobo onamacala amaninzi), Fit (igophe Smooth ngu eziphezulu), spline (igophe gingxi ukusuka kwiindawo), Decurve (ukuphinde usete eziphezulu egosogoso), Dibanisa (Qokelela imigca ezilandelelanayo ) Ububanzi (umgca ububanzi Yetha)
talia chavez albites uthi:
uyanceda undixelele ukuba yiyiphi imfuneko yedatha yomyalelo wepline
UCarlos Berroterán uthi:
Ewe, umlingane wam osebenza naye wenza le nkcazo kum: "ngale intellicad umntu unokwenza into efanayo ne-autocad, unokwenza yonke imidwebo yendawo yokuhlala ngaphandle kokubona umehluko omkhulu" ... Ndiyongeza: kakuhle, de sibe thetha ngexabiso.
Nangona Andizange Ndizuze mvume nayiphi na IntelliCAD apho emarikeni mna sele ezibonakalise eziliqela kubo (phantse bonke version kwecala umnikelo ngqo kwi sayithi yakho). Le nto ndiyenze nje ukwazi kwaye Ndivakalelwa kukuba ngaphandle kokuba amandla inkqubo efana AutoCAD sele bebadala ngokwaneleyo ukuba ibe sisixhobo ukuze bakuthathele ingqalelo. Kubalulekile ukuba akukho clones of AutoCAD 100%, nkqu kunye nenjongo (ngoko bathi) ukuba efana ngokusondeleyo, ukuba iimpawu zabo ezenza umntu azive ngamanye amaxesha ngaphezulu (okanye ngaphantsi) izazi. Ukuba mna ngoku ukuba unyulo kwi-ofisi apho ndisebenza, qiniseka bendiya khetha enye yezi.